Johan Gustafsson oo shir saxaafadda u qabtay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Johan Gustafsson oo shir jaraa'id qabtey . sawir: Vilhelm Stokstad/TT
Johan Gustafsson oo shir saxaafadda u qabtay
La daabacay torsdag 10 augusti 2017 kl 10.12
Maanta ayuu markii ugu horeysay qabtay shir saxafaadeed Johan Gustavsson oo in ka badan 2039 maalmood afduub ku haysteen koox Al-qaacido xiriir la leh wadanka Mali.
Johan Gustafsson oo horey looga afduubey dalka Mali ayaa dokumantaar dhacdadaas laga sameeyey waxaa la soo bandhigi doonaa maanta.
Johan Gustafsson ayaa dokumantaarkaas uga hadlaya isku dey uu isku dayey oo ahaa in uu ka baxsado raggaas afduubey iyo waliba isagoo si khayaananimo ah isugu tusey raggaas afduubey in uu muslim yahay.
Johan Gustafsson ayaa ururka Qaacida wuxuu ku afduubey hotel ku yaala magaalada Timbaktu oo ku taala dalka Mali taariikhdu markii ay aheyd 25-kii november 2011-kii.
Johan Gustafsson oo markii ugu horeysey arrinka afduubkiisa ka hadley ayaa wuxuu yiri sidan soo socota:
- Albaabka qolkii aan daganaa markii aan furey, waxaa hor taagnaa nin qori AK ah ku hubeysan kaas oo isla markiiba qorigaas wajiga iga saarey, markaan wajigiisa fiirsheyna waxaa ka muuqdey oo kaliya laba indhood oo waaweyn maadaama wajiga ay mara ugu duubneyd, ayuu yiri Johan Gustafsson.
Johan Gustafsson ayaa sheegey in dadka afduubey ay mar walba geynayeen gooba kala duwan oo dhulkaas saxaraha ah ku yaal, kuwaas oo mararka qaarkood ku khasbey in ay filim ka qaadaan, wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
- Waxaan mar walba ka fakarayey xaalka aan ku sugnahay iyo waxa aan ka sameyn karo si aan u badbaado, waxaana qabey in marka ay filimkaas iga duubaan ay i toogan doonaan, ayuu Johan Gustafsson.
Dhowr bilood markii afduubkaas lagu heystey ayuu Johan Gustafsson go’aansadey in uu siro dadkii afduubka kula kacey uuna u muujiyo in uu muslin yahay. Arrinkaasi dhab kama aheyn maadama sida uu sheegey uu wali yahay mid aan wax diin ah rumeysneyn, wuxuuna yiri isagoo arrinkaas ka hadlaya:
- Waxaan is tusey in haddii aan muslim noqdo laga yaabo in ay i sii daayaan, waxaan kaloo rabey in aan arrinkaas ku cimri dheereysto, ayuu yiri Johan Gustafsson.
Horaantii sanadkii 2013-kii ayaa Johan Gustafsson isku dayey in uu baxsado balse laba maalmood ka dib ayey heleen kuwii afduubka kula kacey. Johan Gustafsson ayaa xuriyaddiisa heley afar sano iyo bar muddadaas uu baxsadka isku dayey ka dib.
Johan Gustafsson ayaa la sii daayey bishii juun ee sanadkaan ka dib markii 2039 maalmood afduub loo heystey.